Otu n'ime ndị kasị ibumita eletrikndị na-emepụta ihe na ndị na-eweta ngwaahịa na China
Ọhụụ nke Holley bụ ịghọ otu n'ime ndị isi ụwasmart ike njikwandị na-eweta ihe ngwọta.
Holley ga-aga n'ihu na-etolite n'ime mpaghara azụmaahịa ya, wusie ike isi ike, welie ọnọdụ ụlọ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ ahụ ma wetara ndị nwe ya nloghachi na-eju afọ na ntinye ego.
Na-aga n'ihu na-enye ndị ahịa dị ugbu a ngwaahịa na ọrụ na-eju afọ, Holley na-elekwasị anya n'ịzụlite ndị ahịa na ndị mmekọ ọhụrụ zuru ụwa ọnụ ma nye nkwado akụrụngwa zuru oke.Ọ ga-amasị anyị ịmalite mmekọrịta mmekọrịta ogologo oge na ndị ahịa bara uru site na ọrụ nlezianya na ngwaahịa a pụrụ ịdabere na ya.
Anyị na-akwụ ụgwọanyamaka ihe achọrọ na nchegbu nke anyịndị ahịa.
N'okpuru ụlọ ọrụ teknụzụ IOT na smart grid, Holley na-enye ndị ahịa ihe ngwọta na ngwaọrụ iji na-arụsi ọrụ ike na njikwa ike ike ma gbaa onye ọrụ ume ume ọhụrụ ume.Na ahịa metering ọdịnala, anyị na-enye ngwaahịa ndị a pụrụ ịdabere na ya na ngalaba.
Na-akwado ma mejuputa UN Global Compact nke Holley Group bịanyere aka na ya, anyị na-amalite ma soro ndị mmekọ anyị na ndị na-ebubata anyị na-arụkọ ọrụ, wee bụrụ ndị mmekọ azụmahịa zuru ụwa ọnụ ọnụ.
Gaa letaụlọ ọrụ anyị